INook-Yakhiwe kwiinduli zeNorCal
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJoel & Taylor
Ikhaya lethu ligumbi lokulala eli-1 kwaye linomtsalane, elikumazantsi eentaba zeApplegate! Igumbi lokulala linebhedi epholileyo yenkosi enembonakalo entle yendalo ngaphandle kwefestile. Kukho ikhitshi ebanzi, indawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala eyamkelekileyo kuye wonke umntu kwaye iqhayisa ngezinto ezibalulekileyo zokuhlala kwakho! Sikufutshane nezinto ezininzi ezinomtsalane-indawo ezithengisa utywala, iAuburn Wine Trail, iindlela zokuhamba intaba kunye nebhayisekile, imilambo, amachibi nokunye okuninzi! Oku kungasebenza njengenqaku eliphambili kuzo zonke ii-adventures zakho!
•Le yindlu yokulala enye kumgangatho wokuqala we-duplex ebekwe emahlathini! Uya kungena usuka kumgangatho ophambili wocango olungenazitshixo. Kusenokubakho iindwendwe/abaqeshi abahlala kwindawo yethu ephezulu ebizwa ngokuba yiNest Suite ngaxeshanye.
•Isakhiwo esinye neNest Suite yethu. Ireyithi ethotyiweyo ukuba wena kunye neendwendwe zakho ningathanda ukubhukisha zombini iiyunithi.
• Ukuba ukhohliwe okanye ufuna nantoni na, jonga i-bookcase yegumbi lokuhlala lemidlalo kunye nokuzonwabisa, kunye nekhabhathi yamayeza yokuhlambela yesomisi seenwele, uncedo lokuqala kunye neekiti zokuthunga!
• Nceda uqaphele, eli asilokhitshi ligcweleyo, njengoko singenaso isitovu/ioveni. Sinayo nangona kunjalo ipleyiti eshushu eneembiza kunye neepani, isikhenkcezisi esipheleleyo, i-microwave, i-rice cooker, i-toaster, imbiza yekofu, iketile yeti kunye nazo zonke izinto ezibalulekileyo zokunceda ukupheka ngexesha lokuhlala kwakho!
• Izilwanyana zasekhaya bezingekho kwipropati phantsi kobunini bangoku.
• Akutshaywa okanye kufakwe umphunga kulo naluphi na uhlobo kwiyunithi yethu okanye kwipropati nceda.
• I-Intanethi inokuba mabala kwaye ingahambelani ngenxa yendawo esikuyo.
•Ikhaya lethu likwinkqubo yomthombo, unokuqaphela ivumba lentsimbi elichuliweyo xa usebenzisa amanzi.
•Iayini/ibhodi yoku-ayina, isitulo esiphakamileyo kunye nokupakishwa nokudlala kuyafumaneka xa uceliwe. Nceda usithumele umyalezo phambi kwesandla kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba sibe nenqaku elikwiyunithi ukuze kube lula kuwe!
Ikhaya lethu likumazantsi eenduli zeApplegate! Ubumelwane buzolile kwaye buzolile. Yindibaniselwano egqibeleleyo yendawo yasemaphandleni ngelixa isekufutshane kakhulu kwizinto ezininzi! Siyimizuzu eyi-10 ukuya e-Auburn kunye neendawo zokutyela ezininzi kunye nemisebenzi kunye neekhilomitha ezili-13 ukuya kwindawo yezoLonwabo yase-Auburn apho i-North Fork American River idlula kwaye iyindawo enomtsalane yokukhwela intaba nokuhamba ngebhayisekile. Singaphakathi kweyure ukuya kwiDolophu eNdala kunye neDolophu yaseSacramento, iLizwe leGolide, iTruckee kunye neTahoe. Siyakuxabisa ukuba kufutshane kakhulu kwimisebenzi emininzi ngelixa sisakwazi ukonwabela ukuzola kwendalo esingqongileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Joel & Taylor
Sihlala kwikhaya elimhlophe phambi kweyunithi! Sisoloko sifumaneka ukuba kukho into oyifunayo. Senza konke okusemandleni ethu ukuba siphendule imiyalezo ngo-Airbnb ngokukhawuleza, kodwa zive ukhululekile ukubhalela okanye ufowunele ukuba uyafuna. Xa sele kuthethiwe, siyaqonda ukuba ubumfihlo bubalulekile kuwe, ngoko ke amathuba okuba awuyi kuva kuthi ngexesha lokuhlala kwakho!
Sihlala kwikhaya elimhlophe phambi kweyunithi! Sisoloko sifumaneka ukuba kukho into oyifunayo. Senza konke okusemandleni ethu ukuba siphendule imiyalezo ngo-Airbnb ngokukhawuleza,…
UJoel & Taylor yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Placer County